बर्षालाई ११ प्रश्न : यस्तो छ उनको 'सपनाको सहर'
राईजिङ्ग खबर | प्रकाशित मिति : २०७४ असोज २७ शुक्रबार | ०७:२९
आजको नागरिक(काष्ठमण्डप)मा अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटीसँगको अन्तवार्ता छापिएको छ । शिवहरि घिमिरेको प्रस्तुति रहेको अन्तवार्ताको मुख्य अंश यस्तो छ:
तपाईंलाई मन परेको सहर कुन हो ?
-मलाई मन पर्ने सहर पोखरा हो । व्यवस्थित छ प्रदुषण छैन ।
नेपाल बाही कुन कुन सहर घुम्नुभएको छ ?
-म युरोपको धेरैजसो शहर घुमेकी छु । त्यहाँका सबै सहर सुन्दर र व्यवस्थित छन् ।
-आधुनिकता र व्यवस्थापनका हिसाबले नेपालका सहर विदेशी मुलुकका भन्दा धेरै पछाडी छन् ।
-ऐतिहासिक, मौलिक र प्राकृतिक पक्षलाई नियाल्दा नेपाल धेरै अगाडि छ ।
-सहरमा आराम गर्ने शान्त ठाउँ होस् ।
-सहरमा बस्ने एकले अर्को लाई अवरोध नगरोस् ।
-सहरको गल्लीमा कतै फोहोर नभेटियोस् ।
-सडक व्यवस्थित होउन् ।
-सेवा सुविधा लिन झन्झट व्यहोर्नुनपरोस् ।
हाम्रा सहरमा यति विशेषता हुँदाहुँदै पनि पर्यटक आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं किन होला ?
-अझै पनि यहाँको सुन्दरता र ऐतिहासिक पक्षबारे विश्वमा धेरै मानिसलाई थाहा छैन ।
-पर्यटन विकास गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ ।
सहरलाई सफा बनाउन के गर्नुपर्छ ?
-नागरिक(जनता) र सरकार लाग्नुपर्छ । नागरिकले जथाभावि फोहोर फाल्नु हुँदैन । विकास निर्माणका कार्य सरकारी निकायले छिटो सक्नुपर्छ ।
काठमाडौंको मन पर्ने पक्ष के हो ?
-यहाँको मौसम, हावापानी मनपर्छ । सम्पदा, मठ मन्दिर राम्रो लाग्छ ।
यहाँका मन नपर्ने पक्ष ?
-भीडभाड, धुँवाधुलो, ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित पार्किङ मन पर्दैन ।
उपत्यकानजिकै कतै घुम्न जानुपर्यो भने कुन ठाउँ रोज्नुहुन्छ ?
-उपत्यकाभित्र त्यति घुम्ने ठाउँ देख्दिनँ । समय मिल्यो भने उपत्यकाबाहिर जान्छु ।
यहाँको मन पर्ने खानेकुरा के हो ?
-नेवारी खाना मीठो लाग्छ ।
मन भएर पनि घुम्न नपाएको सहर कुन हो ?
-सहर भन्दा पनि देशभित्रकै घान्द्रुक, बन्दीपुर र सुदूरपश्चिमका बजार घुम्न मन छ । समय अभावका कारण यी ठाउँ पुग्न पाएकी छैन ।